L2 Shintsha Abakhiqizi & Abahlinzeki - China L2 Shintsha Ifektri
S4600-28X-SI 10G Intelligent Ethernet Ukufinyelela Shintsha
I-S4600-28X / 52X-SI ingu-L2 10G uplink switch okhaliphile eyenzelwe amanethiwekhi wesithwali kanye ne-MAN. Isekela i-QoS ephelele, imisebenzi ethuthukisiwe ye-VLAN (i-Dynamic VLAN, i-Voice VLAN, i-QinQ, i-N: 1 VLAN Translation njll), i-Ethernet Ring Protection Protocol (G.8032), ukulawulwa komkhawulokudonsa okuhlukanisiwe, ukulawula ukuphepha okukhaliphile, i-OAM (Operations, Administration and Maintenance ), imisebenzi yokuphatha kanye nezinsizakalo ze-Triple-Play ezifeza izidingo zenethiwekhi ezifunwa yinethiwekhi yenethiwekhi, ukufinyelela kwe-MAN. S4600-2 ...
I-S4600-SI Gigabits Dual Stack Intelligent Shintsha
Uchungechunge lwe-DCN S4600-SI kugcwele ukushintshwa kwe-GbE ezimele kunikeza ukufinyelela kwebhizinisi ngezigaba zezinhlelo zekampus nezamagatsha. Lokhu kushintshwa okuphethwe ngokuphelele kunganikeza ngezici ezithuthukile zoLwande 2 kanye namandla we-Power over Ethernet Plus (PoE +) amandla. ihlanganisa ukuphathwa okuthuthukile nemisebenzi yokuphepha ukuhlinzeka ngokusebenza nokukhula. Yisixazululo esifanelekile sokuthunyelwa kwenethiwekhi yamabhizinisi nokuthwala. Izici ezibalulekile nokugqamisa uchungechunge lwe-Green Energy S4600-SI kuthobela i-IEEE ...
I-S4200-SI Series L2 Gigabits Dual Stack Intelligent Shintsha
Uchungechunge lwe-DCN S4200-SI kungukubiza okungabizi kakhulu kwe-GbE kunikeza ukufinyelela kwebhizinisi ngezigaba zezinhlelo zekampus nezamagatsha. Lokhu kushintshwa okuphethwe ngokuphelele kunganikeza ngezici ezithuthukile zoLwande 2 kanye namandla we-Power over Ethernet Plus (PoE +) amandla. Idizayinelwe ukusebenza okulula ukwehlisa izindleko eziphelele zobunikazi, zinika amandla ukusebenza kwebhizinisi okusabekayo, okuphephile, nokonga amandla ngezinsizakalo ezihlakaniphile. Izici ezibalulekile nokugqamisa uchungechunge lwe-Green Energy S4200-SI luhambisana ...